ကမ္ဘာ့ဖလားခရစ်ကက်ချန်ပီယံရှစ်2- WCC2 | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ကမ္ဘာ့ဖလားခရစ်ကက်ချန်ပီယံရှစ်2- WCC2
ကမ္ဘာ့ဖလားခရစ်ကက်ချန်ပီယံရှစ်2- WCC2 APK ကို
WCC75World ဖလားပြိုင်ပွဲအပေါ် * 2% လျှော့ *
မိုဘိုင်းခရစ်ကက်ဂိမ်းထဲမှာ Next ကိုမျိုးဆက်မှကြိုဆိုပါ၏! တိုင်းပုရစ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ယခုမိမိတို့လက်၏စွန်ပလွံမှာအများဆုံးအဆင့်မြင့် 3D မိုဘိုင်းပုရစ်ဂိမ်းရှိသည်နိုင်! သင့်အနေဖြင့်ကျော်ကြား Dil-ကျုံးအပါအဝင်ပုရစ်ရိုက်ချက်များအများဆုံးအရေအတွက်သည်ယင်းရဟတ်ယာဉ်ကိုပစ်ခတ်နှင့် Uper-ဖြတ် play နိုငျပါသညျ! ဒါကပုရစ်ပန်ကာသင်တို့အဘို့တည်ဆောက်ထားဂိမ်းတစ်ခုပါ! သငျသညျမျှော်ကြည့်ဖို့ဝန်ရှိသည်! သင်သည်သင်၏ကစားသမား customize နှင့်စိတ်ကြိုက်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေနှင့်အတူသင့်ရဲ့အဖွဲ့အားပေးစရာနိုငျပါသညျ! သငျသညျလညျး, scintillating animations တွေကိုမျှော်ပိုပြီးခရစ်ကက်ကွင်းသစ်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ကင်မရာအသစ်ထောင့်ကိုကြည့်နိုင်သည်! '' ကမ္ဘာ့ခရစ်ကက်ချန်ပီယံရှစ်2'' ဒါကြောင့်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးပုရစ်လောကီသားတို့သည်အထဲတွင်အများဆုံးအရှိဆုံးပြောင်းလဲနေသောနှင့်စွယ်စုံဂိမ်းစေ features တွေရှိပါတယ်။ ရူးသွပ်ပျော်စရာအဘို့ပြင်ဆင်ရမည် !!
· 150 ကွဲပြားခြားနားရိုက် Animation နဲ့ 28 ကွဲပြားခြားနားသောဘိုးလင်းလုပ်ရပ်များ
။ မိုးရွာရွာ Interrupt, D ကို / L ကို Method ကို
။ LBW နှင့် Edge များအတွက် hot-Spot & က Ultra Edge
·အခမဲ့များအတွက် Blitz ပြိုင်ပွဲပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
· Electrify ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရေငုပ်ဖမ်းမိအတူ၏သားသမီး & အမြန်သည့်ပြိုင်ဘက်အံ့သြဖို့လှဲ။ ,
· AI အပြိုင်ဘက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့
·အတိုငျးဘောလုံးကိုရူပဗေဒကွင်း (သေ, ဖုန်ထူ, အစိမ်းရောင်) အားပေးသောတုံ့ပြန်မှု
· Player ကို attributes - ကစားသမားတသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အပိုကျွမ်းကျင်မှုရရှိ
· 18 ကွဲပြားခြားနားသည့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့များ, 10 ပြည်တွင်းအဖွဲ့များ, 42 ကွဲပြားခြားနားသောအားကစားကွင်း။ စမ်းသပ်ခြင်းခရစ်ကက်, Hot ပွဲများနှင့် World Cup ကိုကမ္ဘာ့ T11 ဖလား, Blitz ပြိုင်ပွဲနှင့် ODI စီးရီးအပါအဝင် 20 ပြိုင်ပွဲထက်ပို။
·သုံးစွဲသူဂိုဏ်းဖွဲ့စည်းရန်နှင့်စိန်ခေါ်မှုများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည့်ခရစ်ကက် mode ကို၏ဂင်္ဂါ။
·စိန်ခေါ်မှုတစ်ဦးကမိတ်ဆွေ mode ကိုသင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်ဖို့အသုံးပြုသူနိုင်ပါတယ်။
· Batsman ဆင်းရဲသားကိုရိုက်ချက်ရွေးချယ်ရေးတို့အတွက်ဒဏ်ရာရရပေမည်။
·အဆိုပါ Fielder ၏စိတ်ခံစားမှုပွဲ၏အခွအေနအရသိရသည်ခြားနားသည်။
·ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာများနှင့် Real-time အလင်းရောင်ဟာအမြင်အာရုံအယူခံဝင်မြှင့်တင်ရန်။
- ပြောင်းလဲနေသောဂိမ်းဒေတာနှင့်အတူ 3D Wagon ဘီး
- ဘိုးလင်းအကျဉ်းချုပ်ဘို့ & LBW အယူခံဘို့အ Hawk ရဟတ်ယာဉ်-မျက်စိအမြင်
- အဝင်ရိုက်ချက်များများအတွက် 3D ဘားဇယားသွင်းယူ run
မျိုးစုံကင်မရာထောင့်နှင့်အတူ·က Ultra နှေးပြကွက်လှုပ်ရှားမှု replays
· 40 + ကျော် In-ဂိမ်းကင်မရာထောင့်
·နှစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရိုက်ထိန်းချုပ်မှု (Classic & Pro ကို)
·နှစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရိုက်ကင်မရာဆက်တင်များ (ဘောလုံးပစ်သူရဲ့အဆုံး & Batsman ရဲ့အဆုံး)
ဦးခေါင်းညှိနှိုင်းသည့်စနစ် - · Fielder အဆင့်မြင့်ဘောလုံးနဲ့အတူပြင်ဆင်ထားသော
ပြောင်းလဲနေသောမြေပြင်အသံနှင့်အတူ· Professional ကအင်္ဂလိပ်နှင့်ဟိန်ဒီဝေဖန်
။ Quickplay နှင့် LED ကိုငုတ်နှင့်အတူအားလုံးပြိုင်ပွဲများတွင်ညဥ့် mode ကို
အားလုံး Modes သာ၌သင်တို့၏ပြိုင်ဘက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်·လက်စွဲစာအုပ်ကွင်းဆင်းနေရာချထား
။ တစ်ဦးကအသုံးပြုသူကစား 11 အဖွဲ့ကစားသမားအမည်များနှင့်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍတည်းဖြတ်နိုင်သည်။
။ လက်တွေ့ကျကျခရစ်ကက်အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် wicketkeeper ဖမ်းမိ, အမြန်ငုတ် & တင်းကျပ်စွာ 3rd ဒိုဆုံးဖြတ်ချက်များ Misfielding ။
။ 250 ရွေ့လျားမှုဖမ်းမိ animations တွေကိုကျော်
။ နယူးလယ်ဒို, Animation နဲ့ 110 + အသစ်ရိုက်ရိုက်ချက်များဆမ်း
·တိုက်ပွဲစမ်းသပ်ပြီးအများစုတဲ့ mid-range ကိရိယာများပေါ်တွင်ကစားအရည် 30fps ပေးအင်ဂျင် updated ။
ဆုပေးပွဲ & အသိအမှတ်ပြု
- အချိန်အားဖြင့် App ကို Annie Report- ထိပ်တန်းအားကစားပြိုင်ပွဲ Spent, အိန္ဒိယ 2016
- Mau, အိန္ဒိယ 2016, 2017 & 2018 အားဖြင့် App ကို Annie Report- ထိပ်တန်းအားကစားပြိုင်ပွဲ
- ပြည်သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဆုချီးမြှင့် Winner NASSCOM ဂိမ်းဖိုရမ်ဆုပေးပွဲ 2015 '' တစ်နှစ်တာဂိမ်း ''
- ဂူဂဲလ်စတိုးဆိုင် play - 2015, 2016 & 2017 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း
- ဂူဂဲလ်စတိုးဆိုင် play - 2017 အများစုဟာဆိုရှယ်ဂိမ်းတွေ
GET_ACCOUNTS - Sign-in ကိုရန်ဂိမ်းသို့သင်၏ Google အကောင့်ကို အသုံးပြု.
READ_PHONE_STATE သင်သည်အမျိုးမျိုးသော updates များကို & ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်အသိပေးချက်များကိုတွန်းပို့ပေးရန်ကျွန်တော်တို့ကို -Enables
ACCESS_COARSE_LOCATION - သင်တည်နေရာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကြော်ငြာတွေ & ကမ်းလှမ်းမှုအားဝတျပွုရန်
WRITE_EXTERNAL_STORAGE & READ_EXTERNAL_STORAGE - သင့်ဂိမ်းတိုးတက်မှုချွေတာဘို့, စာရင်းဇယား, ဂိမ်းပိုင်ဆိုင်မှု, ယာယီသိမ်းဆည်းကြော်ငြာတွေ & ကမ်းလှမ်းမှု
စည်းကမ်းချက်များအညီဒီမီဒီယာစားသုံးမှု & အခြားကိရိယာအချက်အလက်ပေါ် device ကိုကိုနှင့်ကိရိယာသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ & ကြော်ငြာတွေပစ်မှတ်ထားဖို့အတူတူအသုံးချဖို့၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒီ app တွေနဲ့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ Zapr SDK ကိုများအတွက်လိုအပ်သည် ( "န်ဆောင်မှုများ") - RECORD_AUDIO နှင့် RBL န်ဆောင်မှုများ ( "သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ") ၏အခြေအနေများ
- က Android OS ကို: 4.1 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား
- 1GB RAM ကို
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဖို့သီးသန့်4နယူးအင်္ဂလိပ် Stadium
- ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham
- Bristol က
အသစ်က Cutscenes 14
12 အသစ်သောဘိုးလင်း Styles
Player ကို "Edit ကိုအခန်းက္ပ" တွင်ပြောင်းလဲမှုကိုဘိုးလင်း Styles
5 ကျော်နှင့်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ရရှိနိုင် 10 ကျော် option ကို
ကမ္ဘာ့ဖလားခရစ်ကက်ချန်ပီယံရှစ်2- WCC2
379.93 ကို MB
WCC2 Mod APK- ...
ICC ကခရစ်ကက်ကမ္ဘာ့ဖလား ...